हिउँमा रमाउन काठमाडौंदेखि कालिञ्चोक, आहा ! स्वर्ग त नेपालमै रहेछ (हेर्नोस् तस्बिरमा) - Medianp.com
हिउँमा रमाउन काठमाडौंदेखि कालिञ्चोक, आहा ! स्वर्ग त नेपालमै रहेछ (हेर्नोस् तस्बिरमा)
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, पुष २५, २०७३१२:४६0	वर्षा बस्नेत दोलखा, २५ पुस । दोलखाको कालिञ्चोक मन्दिर पर्यटकीय रूपमै नभई धार्मिक रूपमा समेत प्रख्यात छ । सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर दूरीमा ३८४२ मिटर उचाइमा रहेको कालिञ्चोकस्थित कुरी उपत्यका यतिखेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले खचाखच छ । कुरी बजारबाट कालिञ्चोक भगवतीको मन्दिर उकालो लाग्न करिब एक घन्टा समय लाग्छ ।
कालिञ्चोकमा विशेषतः शुक्रबार र शनिबार मोटरसाइकल र फोर ह्विल गाडीको ताँती नै लाग्ने गर्छ । ‘यो वर्ष भूकम्पको कारण मानिस केही कम छन् । तर यहाँ शुक्रबार र शनिबार टाढाटाढाबाट कालिञ्चोक मन्दिरको दर्शन गर्न र यहाँको पर्यटकीय दृश्य अवलोकन गर्न धेरै मानिस आउने गर्छन्,’ मन्दिर परिसरकी फूल व्यवसायी सीता तामाङले भनिन् ।
यहाँको पर्यटकीय सुन्दरताको अवलोकन र मज्जा लिन धेरैजसो विदेशी र आन्तरिक पर्यटक चरिकोटबाटै पैदल कालिञ्चोक आउने गरेको देख्न सकिन्छ । राजधानीबाट ६० जनाको समूह लिएर चरिकोटदेखि पैदल कालिञ्चोक हिँडेकी विद्यार्थी युविका श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हिउँ खेल्दै हिँड्नुको मज्जा नै बेग्लै हुँदो रहेछ । समय गएको पत्तै हुँदैन ।’
हिमपात धेरै हुने गरेका कारण यस क्षेत्रमा निकै जाडो छ । हिउँ खेल्न राजधानीबाट मोटरसाइकलमा दोलखा आइपुगेका एक युवा भन्छन्, ‘बाइकमा आउँदा रमाइलो पनि हुन्छ गाह्रो पनि । ठाउँठाउँमा बाटो बिग्रिएको छ । कति ठाउँमा लडियो पनि ।’ उनीसँगै आएका निरज खत्री भन्छन्, ‘हिउँ खेल्न काठमाडौंदेखि आइयो । स्वर्ग नेपालमै रहेछ भन्ने आफ्नै आँखाले देखें । तर मन्दिरसम्म ठाडो उकालो अलि गाह्रो छ ।’
कालिञ्चोकलाई मुलुकको प्रसिद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीयस्थल बनाउन धमाधम केबलकार निर्माण थालिएको छ । सरकारले समेत केबलकार निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।
शवयात्रामा ५० जना सुन्दरीले गाडीको छतमा बसेर कामुक नृत्य गरेपछि…बच्चा नपाएको निहुँमा श्रीमानले योनीमा ४० सेन्टिमिटर लामो काठको बेल्ना घुसारेपछि…
खाने होइन इलामको छुर्पी ?